စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၉) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on May 23, 2014 at 10:40 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် စကားပြောလုပ်ငန်းများ (Typical Speaking Tasks)
Speaking exam တွေဟာ အပြောင်းအလဲများပြီး သင့်အနေဖြင့် လုပ်ရမဲ့ လုပ်ငန်းတွေကလည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ Speaking exam မတိုင်ခင် သင့်ကို ဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုတာကို တိတိကျကျ သိနိုင်အောင် လုပ်ထားပါ။ တကယ့် စာမေးပွဲရက်ကြီးမတိုင်ခင် စာမေးပွဲရဲ့ အချို့သော ကဏ္ဍတွေအတွက် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ Speaking exam တစ်ခုမှာ သင့်အနေနဲ့လုပ်ကောင်းလုပ်ရမဲ့ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သင့်အကြောင်းပြောခြင်း (Talking about yourself)
ဒီလုပ်ငန်းကတော့ Speaking exam တစ်ခုရဲ့ အစပိုင်းမှာ မေးလေ့မေးထရှိတဲ့ လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုပါပဲ။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ သင့်အိမ်မှာ ပြင်ဆင်ပြီး လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပြောရမလဲဆိုတာကို သိထားရင် စာမေးပွဲရဲ့ အစမှာ သင့်အနေနဲ့ စိတ်သက်သက်သာသာနှင့် ယုံကြည်မှုတွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲမတိုင်ခင် မေးနိုင်မဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မေးခွန်းပုံစံတွေကို စဉ်းစားထားပါ။ ကျောင်း၊ မိသားစု၊ အားလပ်ချိန်၊ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းနှင့် အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်များ အစရှိသည်တို့သည် မေးလေ့မေးထရှိတဲ့ ခေါင်းစဉ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လွယ်ကူတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြေကြားခြင်းကို လေ့ကျင့်ပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နှင့် လေ့ကျင့်ပါ။ (သို့) ကိုယ့်အသံကိုယ်သွင်းပြီး ပြန်နားထောင်ပါ။
မေးခွန်းတွေကို သေသေချာချာ နားထောင်ပါ။ နားမလည်တဲ့ မေးခွန်းပါလာပါက ဆရာကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြောခိုင်းပါ။
အဖြေတွေကို ပြည့်စုံတဲ့ ၀ါကျဖြင့် ဖြေပါ။
စစ်ဆေးသူ၏ မျက်နှာကို ကြည့်ပါ။ သူ့မျက်နှာက သင်ပြောတာ လုံလောက်ပြီး နောက်မေးခွန်း မေးတော့မယ်ဆိုတာတွေကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
အဖြေများကို အလွတ်ကျက်မထားပါနှင့်။ ဘာပြောရမယ်ဆိုတာကို အဆင်သင့် စဉ်းစားထားတာ ကောင်းပေမဲ့ ပုံမှန်မေးခွန်းတွေအတွက် ရှည်လျားတဲ့ အဖြေတွေကို အလွတ်ကျက်ထားတာ မကောင်းပါဘူး။
“ဟုတ်ပါတယ်” / “မဟုတ်ပါဘူး” လို့ပဲ မဖြေပါနှင့်။
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ မေးခွန်း အမေးခံရရင် မထိတ်လန့်သွားပါနှင့်။ ၄င်းကို မဖြေခင် စဉ်းစားဖို့ စက္ကန့်အနည်းငယ် ယူပါ။
သင့်အကြောင်း သင်ပြောနိုင်မဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းအချို့ကို ဥပမာအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
I’m from……………./ I live in………………….(………….က လာတာဖြစ်ပါတယ်။ / ……….မှာနေပါတယ်။)
I was born in……………..(……………..မှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်)
I’m……………………years old. (အသက်………………………….နှစ်ရှိပါပြီ)
I go to……………………school. (……………………ကျောင်းမှာ တက်နေပါတယ်။)
I like…………………..because………….(………………ကို…………သောကြောင့် ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။)
I don’t like………………..because………..(……………..ကို…………..သောကြောင့် မကြိုက်တာပါ။)
Im my free time / After school, I………..(အားလပ်ချိန်တွေမှာ / ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ကျွန်တော်…….)
My best friends are……………..because……….(…………….တို့ဟာ ကျွန်တော့်အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း တွေပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့………….)
My favourite (school subject, actor, pop group, sport) is ………..because……………. (ကျွန်တော် အနှစ်သက်ဆုံး (ကျောင်းသင်ဘာသာရပ်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ ခေတ်ပေါ်တေးဂီတတီးဝိုင်း၊ အားကစား)ကတော့ …………………… ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့………………………)
I have……………….brothers and sisters. (ကျွန်တော့်မှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ……………ရှိပါတယ်။)
In the future, I’d like to………….because…………...(အနာဂတ်မှာ ကျွန်တော်…………ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့………………….)
ဓာတ်ပုံ (သို့) ရုပ်ပုံကားချပ်တစ်ခုခုကို သရုပ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း (Describingaphoto orapicture)
တချို့သော speaking exam တွေမှာဆိုရင် ဓာတ်ပုံ (သို့) ရုပ်ပုံကားချပ်ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အကြောင်း ပြောခိုင်းပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ။ အကြံပြုချက်တွေက ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းပုံစံကို ကောင်း ကောင်း ဖြေဆိုနိုင်အောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။
ရုပ်ပုံကားချပ်ကို သေသေချာချာကြည့်ပြီး စကားစ မပြောခင် စဉ်းစားဖို့အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ။
သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် အပြည့်ပြောပါ။ ပြောဖို့အချိန် တစ်မိနစ်ရရင် စက္ကန့်တိုင်းကို အသုံးပြုပါ။
ရုပ်ပုံကားချပ်ရဲ့ ဘယ်အပိုင်းအကြောင်းကို ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြရာ၌ အသုံးဝင်မဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ စကားအသုံးအနှုန်းတို့ကို လေ့ကျင့်ပါ။
ပုံထဲမှာပါတဲ့ အရာအားလုံးအတွက် စကားလုံးတိုင်းကို မသိရင်လည်း ထိတ်လန့်မသွားပါနှင့်။ သင့်အနေနဲ့ စကားလုံးတိုင်းကို သိရန် မလိုအပ်ပါ။ အရေးကြီးတာကတော့ တိကျတဲ့ စကားလုံးကို မသိတဲ့အခါ ဘာပြောရမလဲဆိုတာကို သင်သိနေခြင်းပါပဲ။
အာရုံပြောင်းသွားပြီး တခြားအကြောင်းအရာ အကြောင်းကို စပြီး မပြောပါနှင့်။ ဓာတ်ပုံ (သို့) ရုပ်ပုံကားချပ် ပေါ်မှာပဲ အာရုံထားပါ။
စိတ်ထဲမှာ လုံးဝ စဉ်းစားလို့မရတော့ရင် ထိတ်လန့်မသွားပါနှင့်။ အသက်ကို တစ်ချက် ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပြီး ပုံကို ကြည့်ပြီး အစက ပြန်စပါ။
စာမေးပွဲမှာ ဓာတ်ပုံ (သို့) ရုပ်ပုံကားချပ်အကြောင်း ပြောခိုင်းရင် သင့်အတွက် အသုံးဝင်မဲ့ စကား အသုံးအနှုန်း အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရုပ်ပုံထဲမှာ ဘာပါသလဲ? (What is in the picture?)
In the picture I can see…………(ရုပ်ပုံထဲမှာ………………ကျွန်တော် မြင်ရပါတယ်။)
There’s / There are………………(………………..ထဲမှာ………….တစ်ခု/များရှိပါတယ်။)
There isn’ta/ There aren’t any………….(…………..ထဲမှာ တစ်ခု / များမရှိပါ။)
ပစ္စုပ္ပန်ကာလ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မှု (V-ing)ကို အသုံးပြု၍ ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို ပြေပြခြင်း (Say what is happening with the present continuous)
The man is…………………ing. (ထိုသူသည်………………….နေပါတယ်။)
The people are……………………ing. (လူတွေဟာ………………….နေကြပါတယ်။)
It’s raining. (မိုးရွာနေပါတယ်။)
ရုပ်ပုံထဲက ဘယ်နေရာမှာလဲ? (Where in the picture?)
At the top / bottom of the picture………….(ရုပ်ပုံရဲ့ ထိပ်/ အောက်ခြေမှာ……………..)
In the middle of the picture………………(ရုပ်ပုံရဲ့ အလယ်ခေါင်မှာ………)
On the left / right of the picture………………..(ရုပ်ပုံရဲ့ ဘယ်/ညာမှာ………..)
next to (ဘေးကပ်လျက်မှာ)
in front of (အရှေ့မှာ)
on top of (အပေါ်မှာ)
တစ်စုံတစ်ရာ မရှင်းလင်းတဲ့အခါ (If something isn’t clear)
It looks likea……….(အဲဒါက …………………..နှင့်တူသလိုလိုပဲ။)
It might bea……….(အဲဒါကတော့……………………ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။)
He would be………………ing (သူ………………..နေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။)
Maybe it’sa……………………..(အဲဒါကတော့……………ဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်။)
Speaking exam တွေမှာဆိုရင် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအကြောင်း ဆွေးနွေးခိုင်းပြီး သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက် ကို တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ တခြားကျောင်းသားတွေ ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ဆောင်နေတာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သင်လည်း လုပ်တတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် video ခွေကို အရင်ကြည့်ပြီး ပေးထားတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ဖတ်ကြည့် မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ် စာမေးပွဲမှာ ရမှတ်ကောင်းကောင်း ထွက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆွေးနွေးပွဲ မစခင် သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို စဉ်းစားထားပါ။
အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင့်ရဲ့ တကယ့်ထင်မြင်ချက်ကို အကြောင်းပြချက်နဲ့ ရှင်းလင်းတင်ပြပါ။
သင့်အဖော် ဘာပြောလဲ နားထောင်ပြီး သဘောတူ၊ မတူကို ပြောပါ။
သဘောတူကြောင်းနှင့် မတူကြောင်းကို ဖော်ပြတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို သိအောင် လုပ်ထားဖို့ကို မမေ့ပါနှင့်။
သဘောမတူကြောင်း ယဉ်ကျေးစွာ ပြောပါ။
သင့်အဖော်ရဲ့ ယူဆချက်ကို တောင်းခံပါ။
လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရဲ့ စက္ကန့်တိုင်းကို အသုံးချပါ။
သင်ပြောခဲ့သမျှ အကြောင်းအရာတွေရဲ့ အချုပ်ကို တင်ပြရင်း ဆွေးနွေးမှုကို အဆုံးသတ်ပါ။
သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပဲ မပေးဘဲနှင့် သင့်အဖော်ကိုလည်း တုံ့ပြန်မှုပေးပါ။
သင့်အဖော်နှင့် သဘောမတူရင် စိတ်မပူပါနှင့်။ ဒါဟာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသော အကြောင်းအရာတွေကို မပြောပါနှင့်။
ဆွေးနွေးပွဲကို မရပ်ပါစေနှင့်။ ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးသွားပါ။
"Communication Strategies" ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍ အောက်မှာ ဆွေးနွေးရာတွင် သဘောတူခြင်း၊ မတူခြင်းကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းများ အကြံပြုထားပါသည်။
ဆွေးနွေးရမည့် ခေါင်းစဉ် ဥပမာများ (Example discussion to pics)
သင့်အား အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ရှိသော (သို့) အကျိုးအပြစ်ရှိသော ခေါင်းစဉ်များပေးကောင်း ပေးနိုင်ပါ တယ်။ အောက်တွင် ခေါင်းစဉ်တချို့ကို ဥပမာအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ဈေးဝယ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ (The internet is the best way to do your shopping)
အသက်(၁၅)နှစ်အောက် လူငယ်များသည် လက်ကိုင်ဖုန်း မသုံးသင့်ပါ။ (Young people under 15 shouldn’t use mobile phones.)
လူငယ်လူရွယ်တိုင်းသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်သည်အထိ ကျောင်းတက်သင့်သည်။ (All young people should stay at school until they are 18).
ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ကလေးများအတွက် အစီအစဉ်တွေထဲမှာ ကြေငြာမပြသင့်ပါ။ (There shouldn’t be any advertising on TV during children’s programmes)
ထင်ရှားကျော်ကြားသော သူများသည် paparazzi (သတင်းကြီးသူများနောက် တကောက်ကောက်လိုက်နေသော သတင်းထောက်)များက သူတို့ကို ဓာတ်ပုံနေ့တိုင်းရိုက်ရင်တောင်မှ ညည်းညူခြင်းမပြုသင့်ပါ။ (Famous celebrities shouldn’t complain if the paparazzi take photos of them everyday.)
အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ မိဘတွေကို စောင့်ရှောက်ရမည်မှာ သားသမီးတွေရဲ့ တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ (It is the children’s responsibility to look after their parents when they get old.)
ခွေများကို မြို့ကြီးများ၌ ရှိနေခြင်းကို တားမြစ်သင့်သည်။ (Dogs should be banned from cities)